Ángel Di María oo isbar-bardhig ku sameeyay xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi – Gool FM
(PSG) 31 Jan 2020. Xiddiga reer Argentina iyo kooxda kubadda cagta PSG ee Ángel Di María ayaa wuxuu isbar-bardhig ku sameeyay xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Ángel Di María ayaa ku tilmaamay xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Lionel Messi inuu yahay kan ugu fiican, halka Cristiano Ronaldo uu ku tilmaamay inuu bahal ku yahay gudaha garoonka.
Ángel Di María ayaa ah xiddiga kaliya ee nasiibka u yeeshay inuu garoon la galo xiddigaha kala ah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé iyo joog dheeraha reer Sweden ee Zlatan Ibrahimović.
Haddaba Ángel Di María ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Tyc sport” ee wadanka Argantina wuxuu ku sheegay:
“Lionel Messi waa kan ugu fiican, sidoo kale Cristiano Ronaldo waa bahal”.
“Neymar Jr wuxuu matalaa farxadda, Kylian Mbappé wuxuu ka badan yahay bahal, sidoo kale Zlatan Ibrahimović waa mid ku waalan garoonka dhaxdiisa, wuxuu leeyahay dabeecad qaas ah, laakiin garoonka banaankiisa waa nin cajiib ah”.
Intaas kaddib Ángel Di María ayaa la weydiiyay su’aal ah suurtogalnimada ay kooxda Paris Saint-Germain ugu guuleyan karto hanashada tartanka Champions League, wuxuuna ku jawaabay:
“Sanad kasta kooxda Paris Saint-Germain waxaa saaran cadaadis ah inay ku guuleysato tartanka Champions League, laakiin helitaankeeda xiddigaha ugu fiican kuma filna”.